सडक दुर्घटनामा चालकमात्रै जिम्मेवार हो ? - Online majdoor
सडक दुर्घटनामा चालकमात्रै जिम्मेवार हो ?
मंसिर ६ गते डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका–११ रडुवा खोलामा से १ क २९३ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा १८ जनाको ज्यान गयो भने २७ जना घाइते भए । मंसिर ११ गते सुर्खेतबाट दैलेख जाँदै गरेको भे १ च २२०७ नम्बरको बलेरो जीप दैलेखको धामी गाउँ नजिक खस्दा पाँच जनाको मृत्यु भयो भने ३ जना गम्भीर घाइते भए ।
यी त भर्खरैका घटना हुन् । हालै इलाम, सिराहा, सप्तरीलगायत जिल्लाहरूमा पनि एकै पटक धेरै जनाको ज्यान जाने गरी दुर्घटना भएका छन् । देशैभरिका यात्रुहरू दुर्घटना र सम्भावित दुर्घटनाको त्रासबाट पीडित छन् । यी दुर्घटनाबारे प्रहरीको प्रतिवेदनले एउटै कुरा औँल्याएको हुन्छ – चालकको लापरवाही ।
के सवारी दुर्घटनामा चालकको लापरवाही नै मात्र कारण हो त ? केही दुर्घटनाको कारण लापरबाही हुनसक्छ तर अन्य कारण पनि कैयाँै छन् । दुर्घटनाका अन्य कारणहरू सर्वसाधारणले पनि सहजै औँल्याउन सकिन्छ जस्तो सडकको दुरवस्था, गाडीको उचित मर्मत र सम्भार नगरिएको अवस्था र यात्रुको चाप । चालक दोषमुक्त छ भन्ने आशय यस लेखनको होइन तर अन्य पक्षलाई बेवास्ता गरेर अघि बढेमा आगामी दिनमा पनि दुर्घटना न्यूनीकरण हुनेछैन । चालकको लापरबाही रोक्न काठमाण्डौ उपत्यकामा जस्तै राजमार्गमा पनि मापसे परीक्षण प्रभावकारी बनाउने, समय कार्ड कडाइका साथ लागू गर्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु र भार बोक्न नदिने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा ठाउँको ठाउँमै कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । ट्राफिक जाँच सही अर्थमै भएमा वा जाँच ट्राफिक प्रहरीको अतिरिक्त कमाइको माध्यम नबनेमा सवारी दुर्घटना उल्लेख रूपमा न्यूनीकरण हुनेछ र धनजनको क्षति रोकिने छ ।